चिन्ता नगर्नुस्, आवश्यकताअनुसार १९५० को सन्धी संशोधन हुन्छ : कोसियारी - Enepalese.com
इनेप्लिज २०७४ चैत २३ गते १०:५९ मा प्रकाशित
सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री भगतसिंह कोशीयारी नेपालको बारेमा अलि बढि चासो राख्ने नेतामध्ये पर्छन् । नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहका भारततर्फका संयोजक समेत रहेका कोशियारी दुई देशबिचको सम्बन्धका बारेमा अलि बढि जानकार पनि छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई समेत नेपाल मामिलामा सल्लाह/सुझाव दिने हैसियत राख्ने पाका नेता कोशियारीसँग ऋषि धमलाले अन्तरवार्ता लिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा धमलाले कोशियारीको निवासमै पुगेर दुई देशबिचको सम्बन्ध र अहिलेको भ्रमणका विषयमा कुरा गरेका छन् । कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
दुई देशबिचको सहयोग र सम्बन्धका बारेमा केही अनुमान त लगाउन सकिन्छ नि ?
नेपालमा भारतविरोधी गतिविधि रोक्नेबारे केही एजेण्डा छ ?
१९५० को सन्धीका बारेमा के भन्नुहुन्छ ?